Wadada weyn ee Gümüşhane-Tirebolu waa xiran tahay dhulbahante awgeed RayHaber | raillynews
HometareenkaWadada Gumushane-Tirebolu oo xiran sababtoo ah dhul-beereed
25 / 05 / 2014 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Wadada Gumushan-Tirebolu oo la xiray sababtoo ah dhul-beereed: Wadada ayaa loo xiray gaadiidka sababtoo ah dhul-beereedka iyo dhagax-dhicii ku dhacay waddada Gumushane-Tirebolu.
Sida laga soo xigtay xogta laga heley fiidkii, kaas oo wax ku ool ah gobolka oo dhan, ka dib markii roobab culus oo ka da'ay tuulada Kirazluk Torul habeenkii dhexe, kiiloomitirkii ugu horeeyay ee ka soo baxa tunnelka Kirada ee dhulka la dhigo iyo dhagax weyn oo ka mid ah wadada oo loo xiray gaadiidka.
Gumushane-Tirebolu 39.kilometresinin waddada ka dib dhacdada kadibna dib-u-eegista ugu horreysa ee Kooxaha Gaadiidka iyo Gandarmeerka ee qaadaya tallaabooyinka ammaan ee lagama maarmaanka ah ayaa xiray wadada sida gaadiidka labada dhinac ah.
Kooxaha wadooyinka ee subaxda leh nalalka ugu horreeya ee gobolka ka dib markii la filayo in dib loo furo waddada, sababtoo ah dhagaxyada wadada ee gobollada iyo degmooyinka aadka u ballaaran waxay ogaadeen in qalabka dhismaha lagu xoojinayo.
Waxaa la ogaaday in gaadiidku gaaray xeebta adoo ka sarreeya Roobka Zigana sababtoo ah xaqiiqda ah in waddada loo maro wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta.
Zonguldakta waxay ku dul burburtay sababtoo ah waddo xiran
War saxaafadeed ka soo baxay Trabzon Tirebolu Gumushane Erzincan
Mashruuca Tareenka ee Trabzon - Tirebolu - Gumushane - Erzincan
Qorshaha Wajiga XnumX ee Erzincan-Gumusshan-Giresun (Tirebolu) -Trabzon Railway
Erzincan-Gümüşhane-Giresun (Tirebolu) -Maamulka Tareenka ee Trabzon ayaa la qabtay
AK Party Gumushane Ku Xigeenka Sare. "Wadada Tareenka ee ka timaada Gumushane…
Argaggixisada naxdinta leh ee magaalada Bursa ... Wadadu waa la xidhay baabuurta
313 Waddada Road Access Access Due East
Elbeylide Works Asphalt